Amerika Latina · Desambra, 2015 · Global Voices teny Malagasy
Amerika Latina · Desambra, 2015
Tantara mikasika ny Amerika Latina tamin'ny Desambra, 2015
Costa Rica 30 Desambra 2015
Brezila 26 Desambra 2015
Brezila 24 Desambra 2015
Però 24 Desambra 2015
Heverina fa any amin'ireo firenena "Andin" ihany no itenenana ny quechua. Nefa, teny maro amin'io fiteny io no ampiasaina amin'ny castillan sy amin'ny fiteny hafa toy ny Anglisy.
Foko sy Fiaviana 19 Desambra 2015
Ireo Mpiteny Ny Jakaro Any Però, Manana Tanjona Ny Hiaro Ny Teniny An-dàlam-pahafoanana
Però 18 Desambra 2015
Mety hoe vitsy ireo mpiteny ny teny Jakaro any Pero, fa tsy kely kosa ny ezaka ataon'izy ireo mba hiarovana ny tenin'ny vondrom-piarahamoniny.
El Salvador 17 Desambra 2015
Nasongadin'ireo fitsirihana natao tamin'ny razana dimin'ireo lehilahy fa voatifitra akaiky izy ireo. Telo andro taty aoriana, ramatoa iray izay vavolombelon'ny fitifirana no tsy hita popoka.
Brezila 15 Desambra 2015